Your process will stop in seconds! Today E-currency Rates 1 USD =0Ks 1 SGD =0Ks 1 EUR =0Ks 1 BTC =0Ks Reserve Amount MyanPay Kyats : 3,200,000 Kyats Bitcoin BTC : 10 BTC Perfect Money USD : 1,500 USD Perfect Money EUR : 1,500 EUR OKPAY USD : 1,500 USD OKPAY EUR : 1,200 EUR WebMoney USD : 1,500 USD WebMoney EUR : 1,200 EUR LiqPay USD : 1,500 USD PayPal USD : 1,500 USD AdvCash USD : 1,500 USD PayPal SGD : 1,800 SGD AdvCash EUR : 1,200 EUR PayPal EUR : 1,200 EUR eCoin USD : 1,500 USD PayWeb USD : 1,500 USD Exmo USD : 1,500 USD Exmo EUR : 1,200 EUR Wallet 1 USD : 1,500 USD VISA/MasterCard USD : 1,500 USD About Us ၁။ VodaExchange.com သည် လျင်မြန်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင် အသုံးများသော e-currency များအား လှဲလှယ်ပေးသည့် Website ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကျွန်တော်များ၏ အဓိကဝန်ဆောင်မှုသည် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အင်တာနက်ငွေပေးချေမှု စနစ်တစ်ခုမှ အခြား ငွေပေးချေမှု စနစ်တစ်ခုသို့ e-currency လှဲလှယ်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ယခုလက်ရှိတွင် MyanPay, OKpay, Bitcoin, Liqpay, PayPal, Neteller, Payza, Qiwi, Visa-master card, PerfectMoney, Wallet 1, Skrill, WebMoney, Payeer, western union နှင့် အခြားသော စနစ်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။
၄။ VodaExchange.com သည် ကမ္ဘာ့္ဘ e-currency လဲလှယ်နေသည့် ဈေးကွက်အတက်အကျ အား စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေပြီး အကောင်းဆုံးသော အသင့်လျော်ဆုံးသော နှုန်းထားများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
၅။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့မည်သည့်နေရာတွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ VodaExchange.com ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၆။ လူကြီးမင်းတို့၏ e-currency လှဲလှယ်မှုများအား Order လက်ခံရရှိပြီးပါက Operation Team မှ အချိန်တိုအတွင်း ချက်ချင်း အမြန်ဆုံး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
၇။ ကျွန်တော်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုအား (၂၄) နာရီပတ်လုံး ရရှိနိုင်ပါသည်။
၈။ VodaExchange.com သည် အသုံးပြုသူများအား အလျင်မြန်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး၊ အရိုးသားဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ပေးရမည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။
၉။ ကျွန်တော်များ၏ အကျွမ်းကျင်ဆုံးဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Professional team သည် လူကြီးမင်းတို့၏ e-currency အခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ၁ဝ။ ကျွန်တော်များ၏ Professional team သည် လူကြီးမင်းတို့အတွက် လိုအပ်သည့် ကူညီထောက်ပံ့မှု များအား ဆောင်ရွက်ပေးရန်အသင့်ဖြစ်နေပါသည်။
၁၁။ ကျွန်တော်များ၏ Professional team အား Contact Us မှတဆင့် သော်လည်းကောင်း၊ Live Chat ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
1. VodaExchange.com is fast, reliable and secure electronic currency (e-currency) exchanger. Our function is to help users exchange one type of e-currency to another.
2. Our primary services are: buying, selling and exchanging of electronic currency: MyanPay, OKpay, Bitcoin, Liqpay, PayPal, Neteller, Payza, Qiwi, Visa-master card, PerfectMoney, Wallet 1, Skrill,WebMoney, Payeer, western union.
3. By constantly monitoring e-currency exchange market, we provide the best rates. 4. We have created flexible discount system for our constant customers and partners. 5. No matter where ever you are in the world , you can exchange your e-currency within hours.
6. We will arrange quickly about your order after we receive your e-currency exchange order and payment.
7. Our service is available 24/7/365 days for e-currency exchange. 8. The main principle of our service is the professional access to needs of our clients. 9. Our team consists of experienced players of e-currency exchange market, working in this sphere more than3years already.
10. Our experience and opportunities together with serious access to the work will help your needs to be realized.
11. VodaExchange support team is always ready to help our clients. You can submitaticket on the website or contact us via Live chat.